Mandalas🥇 प्रविष्ट गर्नुहोस् र Mandalas.wiki बाट आनंद लिनुहोस्
Mandalas ती डिजाइनहरू हुन् जुन धेरै मानिसहरूलाई आकर्षित गर्दछन् र दिमागमा साँच्चिकै फाइदाहरू ल्याउँदछन्। सर्वप्रथम, यो जान्नु आवश्यक छ कि सर्कलको आकारमा चित्रहरू बनाउनु धेरै पुरानो हो।
मण्डलहरूका पहिलो रेकर्डहरू XNUMXth औं शताब्दीदेखि तिब्बतको क्षेत्रमा पर्छ। पूर्व, अरु धेरै देशहरुमा पनि प्रसारित हुँदैछ, जस्तै भारत, चीन र यहाँ सम्म कि जापान मा सबै ठाउँमा मण्डाला शब्द एक हो संस्कृतबाट व्युत्पन्न अभिव्यक्ति , जसको अर्थ सर्कल हो। ती सामान्यतया धार्मिक अनुष्ठान वा ध्यान को समयमा एकाग्रता को एक रूप को रूप मा प्रयोग गरीन्छ।
यस लेखमा तपाईं यो प्राचीन कला को इतिहास को बारे मा अधिक जान्न सक्नुहुनेछ जुन आज सम्म जारी छ र पत्ता लगाउँदछ कि शरीर र दिमागका लागि के फाइदाहरू छन्। किनकि किनकि यो फेला पार्न धेरै सामान्य छ libros लागि रंग र ट्याटूहरू त्यो मन्डला को सबैभन्दा विविध प्रकारका प्रतिनिधित्व गर्दछ।
मंडलहरु के हो? ☸️
मंडला संस्कृत भाषाबाट आएको शब्द हो जुन मृत भाषा हो र यसको मतलब सर्कल हो। यद्यपि, आज पनि, संस्कृतलाई भारतको २ official आधिकारिक भाषाहरू मध्ये एक मानिन्छ, किनकि यसको महत्त्व हिन्दू र बौद्ध धर्मको लागि छ।
यसैले, मण्डलहरु को डिजाइन हो केन्द्रित ज्यामितीय आकार । त्यो हो, तिनीहरू उही केन्द्रबाट विकसित हुन्छन्। सुरुबाट, रेखाचित्रहरू भनिन्छ यंत्र , जुन शब्द हिन्दुस्तानी प्रायद्वीपमा इन्स्ट्रुमेन्टका लागि बोल्ने भाषाहरूबाट आएको हो। त्यो हो, मण्डलहरू तिनीहरू एक निश्चित लक्ष्य हासिल गर्नका लागि साधन हुन् तर लक्ष्य आफैले होइन।
यो उद्देश्य उद्देश्य परिवर्तन प्रत्येक संस्कृति को अनुसार तिनीहरू अवलोकन गरीन्छ। धेरै जसोमा, मण्डलहरू ध्यानका लागि एकाग्रताको रूपमा काम गर्दछन्। फारामहरूमा मात्र एकाग्रता हुनु हुँदैन, तर अत्यधिक महत्त्वको रेखाचित्रको निर्माण।
आकारहरू बिभिन्न सामग्रीका साथ सिर्जना गर्न सकिन्छ, तर तिनीहरू सँधै रंगीन हुन्छन्। मंडलहरू सिर्जना गर्ने सब भन्दा साधारण तरिका भनेको हो रंगीन मसी कागज वा क्यानभासमा। यद्यपि केही बौद्ध मन्दिरले फलाम वा काठले मण्डलहरू बनाउने परम्परालाई कायम राख्छ।
त्यहाँ अझ बढी विशेष मंडलहरू बनाउने अर्को विधि पनि छ जुन विश्वका केही मन्दिरहरूमा बौद्ध भिक्षुहरूले बनाएका छन्। यी मन्दिरहरूमा भिक्षुहरूले मन्दिरहरू बनाउने कलाको अध्ययन गरेका छन् रंगीन बालुवा बर्षहरूमा. रेखाचित्रले घण्टा वा दिन लिन सक्दछ र जब ड्राइंग समाप्त हुन्छ यो तुरुन्तै नष्ट हुन्छ। त्यसो भएपछि मात्र प्रयोग गरिएको सामग्री नदीमा फ्याँकिन्छ। यस कलाले प्रतिनिधित्व गर्दछ कि जीवनमा सबै क्षणिक छ।
तिनीहरू कहाँ र कहिले सिर्जना गरिएको थियो? 🤓
मन्डला निर्माण को पहिलो रेकर्ड को मिति आठौं शताब्दी, तिब्बत अवस्थित क्षेत्र मा । शुरुदेखि नै रेखाचित्रहरू बौद्ध धर्ममा एकाग्रता र ध्यानका लागि सहायताको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो।
यही अवधिमा भारत, चीन र पछि जापानमा पनि मंडलहरू फेला पर्‍यो, यस्तै, केवल बौद्धमा मात्र होइन, हिन्दू धर्ममा र ताओवादमा पनि, जहाँ यिन र याang प्रतीकहरूलाई मंडल मानिन्छ। ।
यद्यपि सबै धर्महरूले चित्रलाई केही चीजको रूपमा व्यवहार गर्छन् पवित्र , जुन प्रायः जीवनको सर्कल प्रतिनिधित्व गर्दछ। बौद्ध धर्मका केही पक्षहरूमा, मण्डलहरूलाई देवताहरूको दरबारका रूपमा चित्रित गरिएको छ र यसैले पवित्र छन्।
यद्यपि पहिलो आधिकारिक रेकर्ड पूर्वबाट आएको भए पनि अमेरिकी महाद्वीपका मूल निवासीहरूले पनि विधीमा केन्द्रित ज्यामितीय आकारको प्रयोग गरे भनेर पत्ता लाग्यो। विशेष गरी उपचार सम्बन्धित कल्टहरूमा। १ XNUMX औं र १ XNUMX औं शताब्दीको बीचमा, चर्चले चित्रहरू प्रयोग गर्न थाले पवित्र कला र दाग गिलास मा importantes भवनहरू .
सोही अवधिमा, किमियाको विचार फैलियो, जहाँ सयौं वैज्ञानिकहरूले सामग्रीलाई रूपान्तरण गर्ने विधिहरू अध्ययन गरिरहेका थिए। यसमा मण्डलहरू पनि सामेल गरिएको थियो किनभने त्यस समयमा रेखाचित्रहरू धेरै हर्मेटिक लेखहरूमा देखा पर्दछ। तसर्थ, यो ज्ञात छ कि मानव जातिको चित्रहरु को निर्माण को मार्ग मा सधैं एक निश्चित आकर्षण थियो, जुन आज सम्म जारी छ।
पहिले नै भनेझैं, संस्कृत भाषाबाट शब्द शब्द मंडलको शाब्दिक अनुवाद होaघेरा। यस सर्कल को रूप मा शताब्दीहरु को लागी प्रयोग गरीएको छ जीवन को पारित को प्रतिनिधित्व वा देवीदेवताहरूका दरबारहरू पनि पूज्न मिल्छ। यद्यपि यो संस्कृतिमा फरक हुन सक्छ।
उदाहरण को लागी, हिन्दू धर्म मा मंडलहरु ब्रह्माण्ड को डिजाइन अनुसार जीवन को प्रतिनिधित्व गर्न प्रयोग गरीन्छ। यहाँ, तिनीहरू के गर्न आवश्यक छ सबैमा एकीकरण र सद्भाव प्रतिनिधित्व गर्दछ।
बौद्ध धर्ममा तिनीहरू शक्तिशाली छन् ध्यान उपकरण तिनीहरूसँग तिनीहरूको आकार र र toहरूमा ध्यान आकर्षण गर्ने क्षमता छ। धर्ममा तिनीहरू अझै पनि जीवनको छोटो प्रतिनिधित्व गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, जब ती बालुवा र देवताहरूको घर बनाएर तयार हुन्छन्।
ताओवादी संस्कृतिमा, यिन यांग दर्शनले मंडलको आफ्नै प्रतिनिधित्व प्रयोग गर्दछ। यहाँ, दुई प्रतीकको मिलन एक सम्पूर्ण रूप र जीवन को सबै पक्षहरु मा कायम हुनु पर्छ कि सन्तुलन प्रतिनिधित्व गर्दछ। पूर्व-उपनिवेश शहरहरूमा, तथापि, चित्रहरू निको हुने समारोहहरूमा प्रयोग गरिएको संकेतहरू छन्।
त्यहाँ कस्तो प्रकारको मंडला छ? 🙂
पहिले नै उल्लेख गरिएझैं विभिन्न सामग्रीहरू मंडलहरूको निर्माणको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस तरीकाबाट, प्रत्येकले फरक कुराको प्रतिनिधित्व गर्दछ, जस्तै व्यक्तिको स्वास्थ्य वा कल्याण, जब कसैको लागि उपहारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यहाँ मुख्य प्रकारका मंडलहरू र उनीहरू के को लागी छन् हेर्नुहोस्।
बालुवा मंडलहरू तिब्बती भिक्षुहरूको बीचमा एक परम्परा हो। यस कलामा रेखाचित्रहरू भुइँमा रंगीन बालुवाका साथ बनेका छन् र यो बौद्ध संस्कृतिमा परम्परागत कुरा हो।
बालुवा मंडलहरू बनाउन सुरु गर्नु भन्दा पहिले, भिक्षुहरूले वर्षौंसम्म प्राविधिक अध्ययन गरेका थिए र ध्यान दिन अग्रिम तयारी गर्न। काम सामान्यतया तयार हुन घण्टा लाग्छ र अन्तमा सबै नदीमा वा अन्य पानीको स्रोतमा फालिन्छ।
विचार प्रतिनिधित्व गर्न छ जीवन का सबै पक्ष को संक्षिप्तता , किनकि एक घण्टामा सबै समाप्त हुन्छ। यस अर्थमा, तिनीहरूले पनि एक नयाँ प्रतिनिधित्व सुरु गर्नुहोस् जस्तो कि यो सँधै नयाँ बालुवा डिजाइन सिर्जना गर्न सम्भव छ।
बौद्ध परम्पराको अर्को उदाहरण काठ वा फलाम जस्ता सामग्रीले बनेको मंडलहरू हुन्। यहाँ तिनीहरू त्रिमितीय आकारहरू लिन सक्छन् र सामान्य रूपमा रूपमा प्रयोग गरिन्छ केहि देवताको घर को प्रतिनिधित्व।
तिनीहरू पनि व्यापक रूपमा उपहार को रूप मा प्रयोग गरीन्छ। यस अर्थमा, प्रक्रिया बिभिन्न परम्परा र रीतिथितिहरू द्वारा संचालित हो, जसको सद्भावनाको अर्थ हो, किनकि कसैलाई उपहारको रूपमा मण्डाल ग्रहण गर्नु राम्रो हुन्छ।
हिन्दू परम्परामा विभिन्न मन्दिर र अन्य पवित्र स्थानहरूमा चित्रित मंडलहरू भेट्टाउनु सामान्य छ। उज्यालो रंग यी प्रविधिहरूमा प्रयोग गरिन्छ, जुन प्राय: हुन्छ विभिन्न प्रतिनिधित्व चक्र शरीर को मानव हिन्दू परम्परामा तिनीहरू ऊर्जा केन्द्रहरू जस्ता छन् जुन मानव शरीरमा फैलियो।
यस तरीकाले, रेखाचित्रहरूमा प्रयोग गरिएको र ofको र these यी चक्रहरू पुन: वास्तबमा ल्याउने र उर्जाको राम्रो सर्कुलेशनलाई अनुमति दिनको लागि हो। यसरी जीवनको आध्यात्मिक र शारीरिक दुवै अर्थमा सुधार सुनिश्चित गर्दै।
कसरी घर मा एक मंडाला कोर्ने? 🤓
भिक्षुहरूले वर्षौंसम्म जटिल रंगका मंडलहरू सिर्जना गर्न अध्ययन गर्दछ। यद्यपि, थोरै अभ्यासको साथ यो कलाको फाइदाहरू ग्रहण गर्न सम्भव छ, यति धेरै काम बिना। यो गर्नका लागि, तपाईं YouTube मा केहि साधारण सल्लाहहरू र भिडियोहरू पछ्याएर आफ्नै आकृतिहरू चित्रण गर्न सक्नुहुनेछ।
सर्वप्रथम, तपाईंले कागजको पानामा सर्कल बनाउनुपर्नेछ, किनकि मंडलाको शाब्दिक अर्थ "घेरा" हुन्छ। तपाइँ सावधान हुनुपर्छ कि रेखाचित्र सकेसम्म उत्तम छ ', यसको लागि तपाइँaप्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कम्पास वा प्लेट। त्यसो भएमा मात्र राम्रो अन्तिम परिणाम प्राप्त गर्न सम्भव छ।
सर्कल पत्ता लगाईयो, तपाईंले बीच खोज्नु पर्छ र रेखा कोर्नु पर्छ। त्यसो भए अर्को सीधा रेखा कोर्नुहोस् र यसो गर्नुहोस् जब सम्म तपाईं पर्याप्त हुनुहुन्न। यो तपाईले सिर्जना गर्न चाहानु भएको सबै मंडलहरूका लागि आधार मोडल हो। त्यहाँबाट, केवल तपाईंको कल्पना प्रयोग गर्नुहोस् र धनुहरू, फूलहरू, ज्यामितीय आकारहरू, र शब्दहरू थप्नुहोस्।
तर याद गर्नुहोस्, उनीहरूसँग तपाइँको लागी एक व्यक्तिगत अर्थ हुनुपर्दछ र तपाइँ आफैले त्यो उत्पादनको लागि आफूलाई समर्पण गर्नुपर्नेछ। जब रेखाचित्र समाप्त हुन्छ, केवल यसलाई रंग, उज्यालो, जीवन्त रंग प्रयोग गरेर।
रala्गमा मन्डलाहरू ☸️
मंडलाहरू विश्वव्यापी हिट भएका छन्। त्यसकारण, त्यहाँ रेडिमेड ड्राइंग र रंग पुस्तकहरूको लागि धेरै विकल्पहरू छन्। दैनिक जीवनका समस्याहरूबाट बच्नको लागि खोजी गर्दा यसले धेरैलाई छनौट गर्दछ। यदि तपाईंसँग आफ्नै मंडलहरू सिर्जना गर्न समय वा सीप छैन भने, यहाँ केहि रेखाचित्रहरू छन् जुन तपाईं घरमा छाप्न र रंग्न सक्नुहुनेछ। जाँच गर्नुहोस्।
के त्यहाँ मंडलहरू डिजाइन गर्न साँच्चै फाइदाहरू छन्?
हो, मन्डेलासहरू शताब्दीयौंसम्म एकाग्रता सुधारको लागि प्रयोग भईरहेको छ र तिनीहरूको वास्तविक लाभहरू छन्। त्योसँग, चित्रहरू चित्रणले कम गर्न मद्दत गर्दछ चिन्ता र तनाव । यसैले जीवनको गुणस्तर सुधार गर्न योगदान पुर्‍याउँछ।
मंडलहरूको बारेमा अर्को सकारात्मक कुरा यो हो कि उनीहरूको आध्यात्मिक पूर्वाग्रहको कारण, तिनीहरू जो कोही पनि ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि ठूलो सहयोगी हुन सक्छन्। जो केवल एक नयाँ शौक चाहनुहुन्छ, तिनीहरू चित्रकला र चित्रकला कौशल मा एक महान प्रशिक्षण हुन सक्छ।